..ရင်တွင်းစကား.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ..ရင်တွင်းစကား..
Posted by gwa toe on Jul 17, 2012 in Copy/Paste | 16 comments
ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော့် ယုံကြည်ချက်နဲ့ မွတ်စလင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဆန္ဒအရဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ဟာ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ပေါ့။ နှလုံးသားအရတော့ ဂျူးတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ခြုံကြည့်လိုက်ရင်တော့ ကျွန်တော်ဟာ လူသားတစ်ယောက်ပါ။ ဒေါက်တာ ဟာမစ်ဆိုတာ တယူသန် မွတ်စလင်တွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့ စာရေးဆရာ၊ အီဂျစ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ မွတ်စလင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ မွေးလာတယ်။ ကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံး အစ္စလာဟ်ဘာသာဝင်တစ်ဦးလိုပဲ နေခဲ့တယ်။ ရက်စက်ကြမ်းတမ်းတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ကျွန်တော်နဲ့ဘဝတူ မွတ်စလင်တွေက ကမ္ဘာ့အနေရာအနှံ့အပြားမှာ လုပ်ဆောင်နေကြတာကို တွေ့ပြီးနောက်မှာ၊ ပြီးတော့ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားက အစ္စလာဟ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုများကို တွေ့မြင်ရဖန်များလာပြီးတဲ့နောက်မှာ ကျွန်တော့်မှာ ခံစားချက်လေးတစ်ခု ပေါက်ဖွားလာခဲ့တယ်။ ဒါကတော့ ကျွန်တော်ဟာ မွတ်စလင်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို လူသားတစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက် အမှန်တရားကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားဖို့ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ပါ။ ဒီခံစားချက်က အစ္စလာဟ်ဘာသာနဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ကပ်ဘေးတွေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတိုက်ပွဲတွေကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ဝန်ခံပါတယ်။ လက်ရှိ အစ္စလာဟ်တရားတွေဟာ မွတ်စလင်မဟုတ်သူတွေအပေါ် အမုန်းတရားနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ဖန်တီးပေးနေတယ်ဆိုတာကိုပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်တွေဟာ ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ ဒီနေ့အချိန်အထိ မိန်းမအများကြီးယူတဲ့စနစ်ကို လက်ခံကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်တယ်။
နောက်ပြီး မွတ်စလင်ကနေ အခြားဘာသာပြောင်းသွားသူတွေကို သတ်ဖြတ်တဲ့အကျင့်တွေက ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်တွေဟာ ကျွန်စနစ်နဲ့စစ်ပွဲတွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့နေရာမှာ ပြတ်သားတဲ့ ရပ်တည်ချက် မရှိသေးတာပဲဖြစ်တယ်။ ဆန့်ကျင့်ကန့်ကွက်တာတွေ မလုပ်တဲ့အပြင် အဲဒီကျွန်စနစ်နဲ့စစ်ပွဲတွေကို ဖန်တီးပြီး အစ္စလာဟ်သာသနာပြန့်ပွားအောင်၊ အခြားဘာသာဝင်တွေကို မွတ်စလင်ဖြစ်လာအောင် လုပ်နေကြပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဂျိဇီယာ (Jizia)လို့ခေါ်တဲ့ မတရားအခွန်ငွေတွေ ကောက်ခံနေကြပါတယ်။ (မလေးရှားမှာ တရုတ်လူမျိုးများကို နှိမ်ထားသလိုမျိုး ဖြစ်မည်ဟု ထင်ပါတယ်…စာရေးသူ)
ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်တွေဟာ “အစ္စလာဟ်ဘာသာကို လေးစားကြပါ”လို့ ကမ္ဘာ့လူသားတွေကို တောင်းဆိုနေကြတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဗလီတွေမှာ ကြာသပတေးနေ့တိုင်း အခြားအစ္စလာဟ်ဘာသာဝင် မဟုတ်သူတွေကို (အာရဗီဘာသာစကားနဲ့) ဆဲရေးတိုင်းထွာနေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အစ္စလာဟ်ဘာသာဝင်တွေဟာ ဂျူးတွေကို ဝက်နဲ့မျောက်ကနေဆင်းသက်သူများလို့ ဆဲရေးတိုင်းထွာကြတယ်။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မွတ်စလင်ဘာသာဝင်ကလေးငယ်တွေကို ဘယ်လို မက်ဆေ့တွေ (သင်ကြားချက်တွေ) ပေးချင်တာပါလဲ။ ဒါဟာ မေတ္တာတရားနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး လက်ဆောင်တွေလား။ အမုန်းတရားလက်ဆောင်တွေလား။
ကျွန်တော် ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေနဲ့ ဂျူးဘုရားကျောင်းတွေကို ရောက်ဖူးတယ်။ သူတို့က ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်တွေအတွက် ဆုတောင်းပေးနေကြတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်ခေါင်းဆောင်တွေက သူတို့ကို ဆဲရေးတိုင်းထွာနေကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မွတ်စလင်မျိုးဆက်တွေကိုလည်း သူတို့ (အခြားဘာသာဝင်တွေ)ကို မုန်းတီးရွံရှာဖို့နဲ့ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများအဖြစ် ခေါ်ကြဖို့ သင်ကြားပေးနေကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်တွေဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်က “မိုဟာမက်ဆိုတာ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေအပေါ်မှာ ကာမစပ်ယှက်သူ”လို့ စွပ်စွဲတဲ့အခါ မိုဟာမက်ကို ကာကွယ်ဖို့ ချက်ချင်းဆိုသလို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကြိမ်းမောင်းကန့်ကွက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ မွတ်စလင်တွေဟာ အစ္စလာဟ်ကျမ်းစာမှာလာတဲ့ “တမန်တော် မိုဟာမက် အသက် ၅ဝ ကျော်သောအခါ အသက် ၇-နှစ်မျှသာရှိသေးသော အမျိုးသမီးငယ်လေးကို လက်ထပ်တော်မူတယ်”ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ ဂုဏ်ယူပြောဆိုနေကြပြန်ပါတယ်။
ပြောရမှာတော့ ဝမ်းနည်းပါတယ်။ မွတ်စလင်များစွာဟာ (အားလုံးတော့ မဟုတ်ပါဘူး) အမေရိကန်က ဝေါထရိစင်တာကို ဝင်တိုက်တဲ့ စက်တင်ဘာ ၁၁-ရက်အဖြစ်အပျက်နဲ့ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားက အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ကြားရတိုင်း ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ကမ္ဘာ့မီဒီယာရှေ့မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်တွေဟာ ဒီလို အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချကြောင်း ကြေညာကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မွတ်စလင်အကြမ်းဖက်သမားတွေကို မွတ်စလင်တွေဟာ သဘောခွေ့နေကြပါတယ်။ လျစ်လျူရှုထားကြပါတယ်။ သူတို့ အကြမ်းဖက်ရခြင်းအကြောင်းကိုတောင် ရှာကြံပြီး အကြမ်းဖက်သမားတွေကို သနားနေကြပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ ဘယ်အစ္စလာဟ်အဖွဲ့အစည်းက အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင် ဘင်လာဒင်ကို “ဘာသာရေးသွေဖီသူ၊ အစ္စလာဟ်တရားတော်ကို ချိုးဖောက်သူ”လို့ တရားဝင်ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပါသလဲ။ ရှေ့နောက်မညီတာတစ်ခုက စာရေးဆရာ ရပ်ချ်ဒိုင်း (Rushdie)ကိုတော့ အစ္စလာဟ်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့စာအုပ် ရေးသားမှုနဲ့ သေဒဏ်ပေးသင့်ကြောင်း ကြေညာပေးခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်တွေဟာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေ ပိုရဖို့ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာ တောင်းဆိုနေကြတယ်။ ဥပမာ ပြင်သစ်မှာ ခေါင်းမြီးခြုံခွင့် ပိတ်ပင်ခြင်းကိစ္စကို ပယ်ဖျက်ဖို့ တောင်းဆိုနေကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့ တကယ်လုပ်သင့်တာက ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အစ္စလာဟ်အစွန်းရောက် လူသတ်သမားတွေကို ဆန့်ကျင်ကြဖို့ အားပေးအားမြှောက်မပြုကြဖို့နဲ့ အစွဲအလန်းတွေ သိပ်မကြီးကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်တွေဟာ အခုထိ ဒါတွေကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း၊ အားပေးအားမြှောက်မပြုပါကြောင်းဆိုတဲ့ ဆန္ဒတွေ မဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ကြပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားကို မဖော်ပြဘဲ တိတ်တိတ်ကလေး နေနေကြတာဟာ အစ္စလာဟ်အကြမ်းဖက်သမားတွေကို သတ်ဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေ ဆက်လုပ်ဖို့၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဆက်လုပ်ဖို့ အားပေးနေတာ၊ တိုက်တွန်းနေတာ၊ စွမ်းအင်တွေ ဖြည့်ပေးနေတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှတာတွေအတွက် အစ္စရေးလူမျိုးတွေနဲ့အခြားသူများအပေါ်ကို အပြစ်တင်၊ လက်ညှိုးထိုးနေကြတာကို ရပ်တန့်ပစ်ဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော် မွတ်စလင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရိုးရိုးသားသား ပြောရရင် အစ္စရေးနိုင်ငံဆိုတာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာ ဒီမိုကရေစီရဲ့ မီးရှူးတန်ဆောင်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုရဲ့အလင်းရောင် ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးများရဲ့ စံထားရာနိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ အာရပ်နိုင်ငံတွေဟာ ကရုဏာတရားမဲ့စွာနဲ့ ဘာနစ်နာကြေးမှမပေးဘဲ ဂျူးလူမျိုးတွေကို ပထုတ်နေကြတယ်။ “လွတ်လပ်သောဂျူးနိုင်ငံတော်”ကို ခွင့်မပြုကြဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အစ္စရေးလူမျိုးတွေကတော့ အာရပ်လူမျိုးသန်းပေါင်းများစွာကို သူတို့နိုင်ငံသားအဖြစ် သူတို့မြေပေါ်မှာ လက်ခံပေးထားပါတယ်။ ဂျူးလူမျိုးတွေနဲ့ အခွင့်အရေးတန်းတူ ခံစားခွင့်ပေးထားပါတယ်။
အစ္စရေးမှာ အမျိုးသားက အမျိုးသမီးတွေကို တရားဝင် ရိုက်နှက်ခွင့်မပြုပါဘူး။ လူတိုင်းလူတိုင်း ဘာသာတစ်ခုကနေ ဘာသာတစ်ခုကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောင်းနိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ အစ္စလာဟ်မှာလို ဘာသာပြောင်းလဲခြင်းဥပဒေအရ သတ်ဖြတ်ခံရမှာကိုလည်း ကြောက်စရာမလိုပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အစ္စလာဟ်နိုင်ငံတွေမှာ ဒီလို အခွင့်အရေးမျိုးကို ရနိုင်လို့လား။ ဒီအခွင့်အရေးမျိုးကို ခံစားကြရလို့လား။ (ဒါဆိုရင် ခင်ဗျားက အစ္စရေးဘက်တော်သား မွတ်စလင်လားလို့ ကျွန်တော့်ကို မေးလိမ့်မယ်)။
ကျွန်တော်အနေနဲ့ ပါလက်စတိုင်းက မွတ်စလင်တွေ ဒုက္ခခံစားနေရတယ်ဆိုတာကို လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ဒုက္ခခံစားနေရတာတွေဟာ အစ္စရေးတွေ(ဂျူးတွေ)ကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ ပါလက်စတိုင်းက အကျင့်ပျက်ခြစားနေတဲ့ (ပျက်စီးနေတဲ့)ခေါင်းဆောင်တွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
အစ္စရေးနိုင်ငံမှာနေတဲ့ အာရပ်လူမျိုးတွေ အာရပ်တိုင်းပြည်တွေမှာ နေချင်လို့ဆိုပြီး ထွက်ပြေးတာကို တွေ့မြင်ရဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ ထောင်သောင်းများစွာသော ပါလက်စတိုင်းလူမျိုး မွတ်စလင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ရန်သူတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ အစ္စရေးမှာ ပျော်ရွှင်စွာ အလုပ်လုပ်ဖို့ အစ္စရေးနယ်မြေထဲကို ဝင်နေကြပါတယ်။ အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပြောနေကြသလို အစ္စရေးတွေက ဆိုးဆိုးဝါးဝါး လူမဆန်စွာ ဆက်ဆံကြတယ်ဆိုရင် ဆန့်ကျင်ဘက်အခြေအနေ (ပါလက်စတိုင်းတွေက အစ္စရေးနယ်မြေထဲ မဝင်ဘဲ၊ အစ္စရေးထဲက အာရပ်တွေကသာ ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေထဲ ဝင်နေကြမယ်ဆိုတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်အခြေအနေ… စာရေးသူ) တွေပဲ ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရမှာ အသေအချာပါပဲ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်တွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ပြဿနာကိုယ်လက်ခံပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ဖြေရှင်းကြရပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှသာ လူသားထုတစ်ရပ်လုံးနဲ့ ညီညွတ်မျှတစွာနေနိုင်မယ့် ခေတ်သစ်တစ်ခုကို စတင်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။
-အစ္စလာဟ်ဘာသာကို သွေဖီသူများကို သတ်ဖြတ်ခြင်း၊
-အစ္စလာဟ်ဘာသာပြန့်ပွားရေးအတွက် မွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံများကို စစ်ကြေငြာခြင်းဆိုတဲ့ အချက်တွေကို ထင်ထင်ရှားရှား၊ ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ကြဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။ ဒီလို လုပ်ဆောင်ပြမှသာလျှင် “ကျွန်တော်တို့ဘာသာကို လေးစားကြပါ”လို့ အခြားသူတွေကို တောင်းဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်တွေအနေနဲ့ “ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင်တတ်တဲ့အကျင့်”တွေကို ရပ်တန့်ဖို့ အချိန်ကျရောက်ပါပြီ။ ပြီးတော့ ဒီအချိန်ဟာ “ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်တွေ ပြောင်းလဲရမယ်”လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရမယ့်အချိန်ပါပဲ။
ဒီစာ လေးကတော်တော် ကိုကောင်းလို့ ကော်ပီလုပ်ပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ ကိုယ်တိုင်ရေးစာမဟုတ် ကြောင်းဝန်ခံ အပ်ပါသည်
သိပ်ကောင်းတဲ့ပို(စ်)လေးပါဗျာ ကျုပ် Facebook မှာ ပြန် Share လိုက်ပီ ပို(စ်)ပိုင်ရှင်ရေ
မူစလင်ဘာသာဝင်စစ်စစ်ဆိုတဲ့သူတွေ များများဖတ်ပီးအသိတရားလေးတွေ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်
ဟေ့ကောင် ကက်ပတိန်စုတ် ဘယ်နေ ့ကျနော့်ဖေ့စ်ဘုတ်ကို
DDos နဲ ့ဆော်လို ့ပြီးမှာလဲ။လိုချင်ရင်ပြော ဖေ့စ်ဘုတ်အ
ကောင့် ပါသွားတာ ဘာမှ နှမျောစရာမရှိဘူး။
” ဟေ့ကောင် ကက်ပတိန်စုတ် ဘယ်နေ ့ကျနော့်ဖေ့စ်ဘုတ်ကို
DDos နဲ ့ဆော်လို ့ပြီးမှာလဲ ”
ဘယ်ဂလိုတွေများ ဖြစ်ကုန်ကြပါလိမ့် ?????
Face Book Account ကို DDos နှင့် တိုက်လို့ရတယ်လို့ ၊
အဘ တစ်ခါမှ မကြားဘူးဘူး ။
ဂီဂီ တို့ အရီး ခင်လတ် တို့ ၊ ပြောပြပါအုန်း ။
အသိစိတ်ဝင်မယ်လို့ နဲနဲမှ မထင်ဘူး ကိုရင်တို့
ဇကောလောက်မှ ဇောက်မနက် ဖြစ်နေမှာ သေချာတယ်
တကယ်ဖတ်လို့လဲကောင်းသလို…. ရင်ထဲကို တစုံတခုအတိုင်းအတာထိ အလင်းရောင်ကိုရသွားစေတယ်။
ဘာသာရေးကိုကိုယ်ပိုင်အသိအမြင်ခံ စားချက်နဲ ့
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီလို စာမျိုးရေးလာလိမ့်မယ်လို့ …… ဒီလို အတွေးမျိုးတွေးတတ်လိမ့်မယ်လို့ … တစ်ခါမှ မစဉ်းစားခဲ့မိဖူးဘူး …. ။ အခုလို စိတ်ဓါတ်မျိုးရှိတာ ချိီးကျူးပါတယ် ။ …. ဒါပေမယ့်လည်း …… တစ်သိန်းမှာ တစ်ယောက်လောက်ပဲရှိနေနိုင်တဲ့အတွက် ၊ …. သူတို့လုပ်ရပ်တွေပြောင်းလဲသွားမှာတော့မဟုတ်ဘူး …………
ပြန်ကူးတင်ပေးသူကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် ။
ဒီလို အချိန် ဒီဆေး နဲ့ ကုလို့ မှီနိုင်ဖို့ရာ မလွယ်ကူနိုင်တော့ပါ
အဖြစ်ပျက်တွေက အားလုံးကို သတိရှိစေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်
တိုင်းရင်းသား အစစ်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ သံမှိုစွဲထားသလို ဖြစ်နေရပါပြီ
ဖြစ်ရပ်မှန်တွေကို အရှိအတိုင်း သုံးသပ်နိုင်မှု
စာရေးသူဟာ မွတ်စလင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတောင် မေ့သွားတယ်
ခေါင်းစဉ်နဲ့ လိုက်အောင် ရင်တွင်းစကားတွေပေါ့နော်…
မွတ်ဆလင်တွေထဲမှာ အဲ့လိုမျိုး အတွေးအခေါ်ထက်မြက်တဲ့သူတွေရှိနေတာသိရလို့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါတယ် ။ အဲ့ဒီလို အတွေးအခေါ်မျိုးတွေ မွတ်ဆလင်တိုင်း ပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျား…..။
ဟေ့ကောင်အရူး မင်း FB Account ကိုလုပ်ဖို.နေနေသာသာ ငါ့ဘာငါတောင်ယားလို.မကုတ်အားဝူး
မင်းကိုလုပ်တာ တစ်ခြားသူတွေလုပ်တာ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် မင်းကိုငါကြည့်လို.မရဝူး။
ဘာပြန်ပြောလဲ ကျွန်တော်လဲခေသူမဟုတ်ပါဝူးဆို :-) မင်း MG ကိုစဝင်လာကတည်းကငါကြည့်နေတာ
ကြာဘီ မိန်းမလိုလို ယောက်ကျားလိုလိုနဲ. ဟိုလူကိုဖောလိုက် ဒီလူကိုဝင်ရောလိုက် နောက်ဆုံးမင်းတို.
ဝင်လာတဲ့အုပ်စုထဲမှာ မင်းတစ်ယောက်ပဲဟိုလိုုလို ဒီလိုလုိုနဲ့.ကျန်ခဲ့တာ။မင်းဝင်လာကတည်းကစောက်
ပြသာနာတွေ အာရုံတွေနောက်ပီးဝင်လာတဲ့ကောင် မင်းဘာမင်းနေသာသလိုနေ နောက်ဆိုဖင်လာလာ
မယားနဲ. ငါကဒဲ့သမား မင်းအဆင့်နဲ.တတ်တတ်မလာနဲ.နောက်ဆို မင်းက ဒီထဲမှာကျတော့ တော်ကီက
တစ်မျိုး FB ထဲမှာကျတော့တစ်မျိုး ယောက်ကျာ်းဆိုရင် ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ဘာကိစ္စမဆို ဒဲ့ပြော ဒဲ့ရှင်းရတယ်
မိန်းမလိုလို ကလေးလိုလို ခွေးလိုလုို မလုပ်နဲ.လေ။
အွန် :mad: … ခင်ဗျားတို့ ကြားမှာ ဘာပြသနာတွေရှိလဲ မသိပေမယ့် ….. ခိုင်းနှိုင်းပြောဆိုတဲ့ အခါမှာ မဆီမဆိုင် မိန်းမတွေလိုပဲဆိုတာမျိုး မသုံးပါနဲ့ ….. ။ ခင်ဗျားတို့အမေတွေလည်း မိန်းမတွေဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ …. ။
မိန်းမတွေက တဆင့်နိမ့် လူတန်းစားတွေ မဟုတ်တာ သတိရစေချင်ပါတယ်
မအီးတုံးရေ စကားအဖြစ်နဲ.ပြောတာပါ မိန်းမတွေကိုနှိမ်လိုတဲ့သဘောနဲ.ပြောရခြင်းမဟုတ်ပါ။
ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော်မှာ အမေ ညီမတွေ အဘာွးတွေရှိတယ် အကုန်ရှိတယ်။ယောက်ကျားလေး
ကယောက်ကျာ်းအလုပ် မလုပ်ဘဲ ယောက်ကျားမပီသရင်ဘယ်လိုပြောကြသလဲ ပတ်ဝန်းကျင်က ????
ဟာ ဒီကောင် ကနွဲ.ကလျနဲ. မိန်းမလိုမိန်းမရနဲ.လို.ပဲပြောကြတာပဲမလား တဆင့်နိမ့်တယ်လို. မိန်းမတွေ
ကိုသတ်မှတ်တာမဟုတ်ဖူး အဲ့ပြောခံရတဲ့ယောက်ကျားဆိုတဲ့သူကိုပဲစကားအဖြစ်နဲ.ပြောတာ :-)
မနောက်ပါနဲ.ဂျာ ကျွန်တော်ကို ဒီင်္ကောင်အာရုံလာနောက်နေလို.ဖြေရှင်းနေရတဲ့ကြားထဲ နောက်တစ်
ကွိုင်လာတတ်နေပြန်ပါဘီ။ နောက်မရှင်းတော့ဝူးနော် မအီးတုံးကိုစာထဲကနေရော စိတ်ထဲကနေရော
Respect ရှိတဲ့မို.လို.ပြန်ပြောတာ တစ်ခြားလူတစ်ယောက်သာဆိုစကားတွေအများကြီးပြောနေရလိမ့်မယ်
အဲလူရော ကျွန်တော်ရော မကောင်းဝူးဖြစ်သာွးလိမ့်မယ် အကျိုးဆက်က အထာ ထားပေးလိုက်တာပါ
ဟို အရူး မင်းကိုထပ်ပြောအုန်းမယ် မင်းနောက်ကွန်ပျုတာမသုံးနဲ. နားမလည်ဘဲနဲ.
ရီစရာကောင်းတယ် DDos နဲ.တိုတ်တယ်ဆိုတာ ငါနောက်လိုက်တာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်စားလိုက်တာကာွ မင်းကို အဲဒါကို
ယုံတယ် ဆိုကတဲက မင်းအဆင့်ဘာလဲဆိုတာ ငါသိသာွးဘီ မင်းအကောင့်ကိုဘာလုပ်ခံ
ရတာလဲတော့ငါသိတယ် ရိုးရိုးလေးပဲ သိချင်ရင်ရိုရိုသေသေလာမေး ;-)